Ungangenisa njani amanqaku ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-AutoCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Indlela yokungenisa iiDots e-Excel kwi-AutoCAD
Indlela yokungenisa iiDots e-Excel kwi-AutoCAD
Masithi sinoluhlu lwamaphuzu athathwe nge-GPS, okanye u-UTM ulungelelanisa oluse-Excel kwaye sifuna ukuwadweba kwi-AutoCAD.
Kwimeko yabasebenzisi be-Microstation, ndacacisa ngaphambili kule post, ukungenisa kwifayile ye .cvs, ukongezelela amanye amanqaku ukwenza kube mnandi.
Ukuthumela ngaphandle ukusuka kwi-dwg ukugqwesa ubona oku kuthunyelwe.
1 Lungiselela ifomathi yokulungelelanisa
Kwimeko ye-AutoCAD, nangona into eyona nto iyenzayo ukuyenza kunye neenguqu ezindala zeSoftdesk8, okanye i-CivilCAD, makhe sibone indlela ephosakeleyo yokuyenza ngaphandle kokusebenzisa i-lisp okanye ezinye izicelo.
Ezi zilungelelaniso onokuba nazo kwi-Excel, kuba injongo kukugqithisa kwifomathi umgca we-autoCAD umyalelo owamkelayo, oya kuba:
ukuququzelela x, i-comma, ukulungelelanisa kunye
Ewe, ukwenza oku, senza oku kulandelayo ngokugqwesileyo, kwikholam elandelayo sibhala ifom
Into esiyenzayo kukukhuphela iseli A2, emva koko ikoma, emva koko iseli B2 Siyangena kwaye sikope ifomula ezantsi. Kwimeko apho sinonxibelelaniso ku-z, ngokufanayo, emva kwe-B2 siya kwenza enye ikoma kwaye sibhale i-C2.
2 Khuphela i i ngcombolo
Le yindlela esiye ngayo.
Khetha zonke iiseli kwikholam C, uze ukopishe kwibhodi yokunamathisela (Ctrl + C)
3 Dweba amanqaku kwi-AutoCAD
Ngoku ku-AutoCAD sibhala iPopayi yomyalelo, (Dweba / iphuzu / iphuzu eliqela)
Ngoku udibanisa into onayo kwibhodibhodi (Ctrl + V) kumgca womyalelo
Kwaye kunjalo, kukho iingongoma zakho
Xa ungaboni kakuhle amanqaku, tshintsha ifomati (Ifomathi / isitayela sepaji)
Yintoni ... uyazi enye indlela yokwenza?
Ukuze udwebe iipoloni, sebenzisa i-plowing pline esikhundleni somyalelo wephuzu, kwaye iya kutsalwa.
Ngombulelo kulwazi lwe-jordi, kukho imacro yokuyenza ngendlela esebenzayo ... yifunde kwizimvo zalo msebenzi.
Umhla wokubonga onokudalwa kwi-intanethi
Ngubani onomdla kuye. Ndidinga uncedo lokugqithisa ukulungelelaniswa kwam ukuya kwi-autocad, ndenza yonke iprosesimiento kakuhle (ndicinga njalo) kodwa amanqaku akaveli kum. Ndibonile tutorials ezininzi zendlela yokwenza, ndiyilandela ukuya kwileta kodwa ekugqibeleni ayisebenzi. I-PS: Ndine-autocad 2012.
JAIME ANDRADE uthi:
inkqubo entle kakhulu
Simele sibone ityala. Andiyi kuqonda
Sawu, Siyabonga ngetitshala. Ndinombuzo, ndachitha imephu ngesimo kwi AutoCAD, kwindawo yokungena ukuzoba imigca embalwa ngaphezulu kule moya ngokusebenzisa inkqubo tutorial, oko kundinika isikhewu esikhulu kwaye umgca uvela inqwelomoya yam. Yintoni endiyenzayo? Ndiya kuxabisa naluphi na uncedo.
Kwamanye amanqaku esayithi kukho ezinye iintlobo zezixhobo zokufunayo.
Segui seu roteiro i-AutoCad 2017, i-porém sem axito na adição inikeza uluhlu lwee-coordinates, esinye iseli ngexesha.
Ngaba kunokwenzeka ukuphakamisa iskripthi kwi-adição yohlu lweekhonkco? kuquka okanye i-nome do ponto. Nceda
Qalisa umyalelo weengongoma, uze unamathisele uluhlu uze ufake.
Le yindlela okufanele isebenze ngayo.
umzukulu wesiJerman uthi:
Ndinezi ngqungquthela kodwa andiyikopopi i-2015 eyi-autacd endiyithandayo njengoko ndenzayo
Ndiyaqonda ukuba into oyifunayo uluhlu lwe-x, y, z z i-coordinates uze ubangenise ne-CivilCAD okanye i-Civil3D
Kuya kubakho ukujonga ukuba yeyiphi iphepha leedatha.
Gustavo Etchichury uthi:
UJuan Ruano uthi:
Enkosi sithuba 'umdla kodwa mna ezingumqobo, xa khuphela amanqaku kwi AutoCAD Excel, endaweni mna wandibetha amanqaku ukucola kwetafise Excel, ngoko ke kufuneka benze imibulelo antmano
Nathaly Zeballos uthi:
Genie weGenies !!! bulela!
Ungayifaka kwi-txt, ngenkcazo kunye nento yonke, kodwa ungasebenzisi i-AutoCAD kuphela, kufuneka usebenzise i-AutoCAD Civil3D okanye nayiphi na inkqubo kunye ne-GIS.
Ukuba ufuna ukukwenza kuphela nge-AutoCAD okanye nje nge-Excel, kufuneka ubhale i-macro okanye i-Excel okanye i-Autolisp.
Norelkis Salazar uthi:
Ngamanye amazwi, ukusetyenziswa kwe-macro kuyimfuneko. Yaye ukuba ndithumela kwi-txt.
Omnye umbuzo, ukuba ngaba ndineenguqu ezininzi, inkqubo iyahluka okanye ndiyakwazi ukusebenzisa okufanayo, umzekelo we-axis of (i-East, North), ukuphakama, indawo kunye nencazelo.
Ndiyabulela kakhulu inkxaso enokundinika yona.
zillion thousand puntotes, mbulelo
Khumbula ukuba i-AutoCAD isebenzisa i-comma njenge-separator eyiwaka, ngoko awukwazi ukuthetha i-80600,56; 890500,79
UYESU MELENDEZ uthi:
Mholweni. Ndine-nikon322, isikhululo esi-5, ngentambo yoqobo kwaye andinakho ukukhuphela idatha xa ndihamba 2.5
okanye kumntu omele ndiyenze ntoni?
Non-stop uzame ukuzalisekisa kuluhlu phantsi, ukuba bahlabele ingongoma, entla, empumalanga, ukuphakama, ikhowudi yeenowuthsi athatha, kodwa andikwazi ukuyithenga AutoCAD 14. Yiyiphi inyathelo endiyayilandelayo ukuba ndiyenze kwaye ndikhuphe iikali?
Sawubona Fernanda. Kukho amathuba amaninzi.
Molo! Ndifuna ukuzoba malunga ne-10000, ngokudibanisa ku-X naku-Y, ndinokuvumelana kwaye ichazwe into enje: 1,0.52,1.78…, ulungelelwaniso ku-X lwahluka phakathi ko-1 ukuya ku-25.! Umbuzo kukuba, ndiyigcina ifayile kwi-SCR, kwaye xa ndifuna ukuyivula kumyalelo we-autocad, indixelela ukuba ifayile ayaziwa! Ukongeza ekubeni ndikwazi ukuzoba, ndifuna ukuba ngalo lonke ixesha ndiguqula ipredishithi yam ebalaseleyo, umzobo we-autocad nawo uyalungiswa! Ukususela sele enkosi kakhulu
LIphi IIMPENDULO ZEMPENDULO EZIPHAKATHI KWI-AUTOCAD 2015 ??????????????????????
Ukuqwalasela ifomula = CONCATENATE ( "_ INGONGOMA"; B1; ","; A1; ","; C1; "_-TEXT @0,0,0 5 0"; D1) Cesar, zitshekishwe kutheni wanika impazamo yaye zilawulwa ukuphuhlisa ngcono . Faka isicelo sokufaka indawo ngeenkcazo. Ndaba ku AutoCAD for Mac 2015 kwaye ngolu hlobo = CONCATENATE (A4; B4-C4-D4-E4-F4-G4; H4).
A4 = _POINT (eneendawo ekupheleni)
B4 = X ulungelelaniso
D4 = Y ulungelelaniso
F4 = Z ukulungelelanisa
I-G4 = _-TEXT @0,0,0 5 0 (eneendawo ekuqaleni nasekupheleni) (inombolo 5 ithetha ubungakanani bombhalo kunye ne-0 ukuqhelaniswa, ukuba kuyimfuneko bayakwazi ukuyitshintsha)
H4 = INKCAZELO
Ifomula ifakwe kwiseli ye-I4 okanye naphi na apho bayifunayo.
Unakho ukuqhagamshela kwetafise Excel kunye iingongoma AutoCAD, okt I kungena iingongoma bam kwetafise Excel, aba kuhlanganiswa AutoCAD screen yaye xa uvula itafile Excel kwaye utshintshe i ukuququzelela, oku kwakhona ukuguqula isikhundla sakho kwi-AutoCAD ???????
Ngethuba kunokwenzeka ukudibanisa itafile kunye nezilungelelaniso kwi-AutoCAD, kwaye xa iindawo zilapho, vula ithebula eligqwesileyo kwaye uguqule iphuzu kwaye liya kutshintsha indawo yayo kwi-AutoCAD?
Pompilio Cruz Gonzalez uthi:
Ukuba ungithumela ifayile ye-Excel ukutshintsha indlela idatha yakho ehlelwe ngayo, ndinokuxelela indlela onokuyenza ngayo.
Hi .. Unganditsho ukuba ungadlulisa njani ukusika okanye ukuzalisa idatha ukusuka kwi-autocad ... Ndiyabonga
isithunywa se-saline uthi:
JAIRO OROZCO uthi:
Ndiyabulela amavidiyo akho, ayiluncedo kakhulu, andincede kakhulu kwi-autocad learning. UTHIXO akusikelele.
Zama ulungelelaniso olujikelezayo, ukuze ubone ukuba luyayifaka njani kwindawo enomdla, uze ungeze amanqaku ukuze ubone oko kwenzekayo.
Andizi, andinakuyiqonda yonke ingxaki yakho.
Kubonakala kum ukuba awubekanga amashishini kunye nabahluli bamawaka kunye namaphuzu njengabahluli bokugqibela
Sawubona uJoseph Luis, ndixolise ukuba ndakwazi ukuphendula ngexesha. Mhlawumbi iyakunceda.
Ukuba ucacisa into oyenzayo okanye ukusikopisha apha inxalenye yento oshaya AutoCAD mhlawumbi sinokukunceda.
umzalwana xa ndiyifaka umfomfostile, undiphosa isinyathelo esingalunganga sokuba ndiza kwenza okubi
Ndazama ukuthutha iphoyinti kwi-autocad, ndakwazi ukuyenza ngongoma kodwa kungekhona umbhalo. Sebenzisa i formula epapashwa kwaye umyalelo okubhaliweyo yenziwe, kubandakanywa iparameters ezifana ileta ubude engile ujikelezo, kodwa hayi umbhalo lowo kwiseli D1 ifakwe, isalathisi ezibengezelayo elindele okubhaliweyo ukusuka yezitshixo. Ndiza kuxabisa naluphi na uncedo.
Ogqwesileyo! Uncedo oluxabisekileyo, nceda uqhubeke ukuze sandise ulwazi lwethu ngeminikelo yomntu wonke ...
Oko uhlala kuJaime, le template ayisebenzi.
Kodwa i-AutoDesk Civil 3D ingenza ngcono.
IJAIME ROMERO uthi:
NDIFUNDA KANTONI UKUBA NDIFUNDA ABAKHULU NAMAKHODI IIMVIWO ZE-ANDEN VIA (Ect)
Ndandincede kakhulu, ndiyabonga kakhulu
Ukwandisa ukungathandabuzeki ukuze sibone indlela yokukunceda ngayo
Ndifuna ukwazi ulwazi oluthe xaxa kodwa ngeencwadana, mbulela
Hlola ukucwangciswa kweenguqu zengingqi.
Qinisekisa ukuba umhlukanisi wexesha elide lixesha, i-separator yamawaka i-comma, kwaye uhlu lohlula uluhlu lwe-comma.
UCarlos Rene uthi:
Emva kokungena kwiinqununu zeli nqanaba likulungele ukufumana umbhalo ochazayo weeseli D ngophawu @ kwiinguqu ezingenayo igalelo elinamandla.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ifom yeengxelo zam zangaphambili ziza kuba kwiseli lomqolo 1
Ndiyakunomdla wokungena kwii-coordinates kunye ne-X, Y, Z, kodwa ke ndiyabona kwi-commentary yokuyeka kwifom
Ngaphambi kokuba nibulele
INKOSI EYI-EXCELLENT YENKQUBO YOKUSEBENZISWA KWAKHO!
Yamkele iX, Y, Z
X column B, Y uA, Z umhlathi C, ikholam D inkcazo le fomyula ilandelayo iyasebenza umhlathi E ekukhupheleni Cola kwilayini yomyalelo AutoCAD kwaye ukuphumeza ukungenisa indawo nge inkcazelo.
Iyakwazi ukuhluka ngokukodwa kwenguqu kodwa ingcamango leyo.
Ekugqibeleni kwakuyinkinga yokusondeza, yayisebenza kodwa kude.
Kwakumfuneko ukwenza isangqa se-500 metres ububanzi, malunga ne-coordinate eyaziwayo, ukubona ukuba imigca ikhona.
Yingakho ndincoma ukuba usondele, ubukhulu.
Kubonakala ngathi awukwazi ukuqhubela phambili.
Ukuba uyazi iQelaViewer, ligijime kwaye ungithumelele umyalezo kwi-imeyili:
KUNYE NOKUNYE, UKUPHILA OKUQALA
Ngaba kukho into ephuma okanye engenzi nto iphume?
Andiyazi ukuba kutheni ndifumani i-polygon kunye nalabo basebenzisana nabo
Ewe, kubonakala kum ukuba udweba, kwaye ukhangela umgca ongapheliyo ngenxa yokuba ukubonisa kwakho kukude kwendawo.
Zama ukulandelela emva kokusebenzisa umyalelo (usebenzisa umgca) ukubona ukuba ukuthunyelwa kusekho kwindawo.
ifayile yam i-acad.dwt
ukulungiswa kwesithili kulungile.
njengoko ndikuxelela ngamanani amancinci ukuba undidweba.
Izixhobo zeMenyu ze-AutoCAD ezilayishiwe.
Myalelo: _line Cacisa iphuzu lokuqala:
Akukho mgca okanye i-arc ukuqhubeka.
Cacisa iphuzu lokuqala: 304710,1713474
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [Hlehlisa]: * Khansela *
Myalelo: * Cancel *
Myalelo: _line Cacisa iphuzu lokuqala: 304710,1713474
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [Hlehlisa]:
Gcina ngokuzenzekelayo ku-C: IDOCUME ~ 1DiegoCONFIG ~ 1TempDrawing2_1_1_2921.sv $…
Ububanzi bomda obunje yi0.0000
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304718,1713482
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304720,1713490
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304722,1713494
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304724,1713500
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304726,1713511
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304733,1713516
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304735,1713517
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304741,1713522
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304739,1713524
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304745,1713535
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304747,1713537
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304748,1713535
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304749,1713520
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304748,1713517
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304752,1713510
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304754,1713509
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304752,1713503
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304751,1713503
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304739,1713501
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304741,1713491
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304742,1713490
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304751,1713481
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304755,1713477
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304760,1713473
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: 304710,1713474
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]:
Cacisa iphuzu elilandelayo okanye [I-Arc / Close / Halfwidth / Ubude / Hlehlisa / Ububanzi]: * Khansela *
Enye inokwenzeka ukuba iiyunithi azichazwanga kakuhle, oko kukuthi, loo ngongoma ithathwa ngokuba yi-comma yokuhlukana kwamawaka.
Qaphela loo nto.
Undixelela ukuba uyamkela ulungelelaniso lwe-3,8, oko kukuthi, ngenani elincinci.
Andiyazi ukuba iifayile zakho ze-dwg ziphi, kodwa kwenzeka kum ukuba kungenokuba yendawo yokusebenzela kunye nomda obekwe ngaphambili kwaye ulungelelaniso ngaphandle kwalo awwamkeli.
Zama ukwenza olunye uhlobo lwezinto, kungekhona ingongoma kodwa umgca.
kwaye ubone ukuba umgca uthathwa okanye ufumana umyalezo ongekho kwibanga.
Ndithetha ukuthi xa usebenza utm eziliqela equlathe uququzelelo amanani 7 7 in UX yaye umzekelo (304710,1713474) kunye nekopi uncamathisele ndifumana umgca ongapheliyo becela kum punto..pero kuqala xa usebenza zilungelelanise umzekelo okanye 3,8 12,4 khona ukuba udwebe ... nceda undincede ukuba ndilela.
Faka igama lakho ... uthi:
Yosilo Prieto Rico uthi:
U papasho oluhle. Igalelo elihle kakhulu lobugcisa. Ndiyavuyisana nomntu ngamnye ngenxa yezenzo zokuzikhusela kwaye ndiyanincoma ukuba uqhube phambili ekuhlaleni kolwazi loluntu. KWAMAKHADI AMAKHADI
Le ndlela yayiluncedo kwaye iyakhawuleza
Sawubona wonk 'ubani, enye indlela emva kokuyikopisha, unamathisele kwincwadi yencwadi uze ufake umyalelo kumgca wokuqala, i-polyline (pl), indawo (iphuzu), faka ibhloko (faka).
Iqhinga kukuba xa ulondoloza, londoloza njengefayile ye .scr kwaye uyilayishe ukusuka kwi-autocad ngomyalelo weskripthi.
Kwifayili enye unokubeka imiyalelo emininzi kwaye udibanise nabo, sele kusekho ubuchule bomntu ngamnye.
Ngoku ukuba ndiyakhumbula, kungcono ngale ndlela ukuba unayo ibhloko kunye nezixhobo kwaye kufuneka uzifake ngokuzenzekelayo, umzekelo:
Sinebhloko ngendlela yesikwere kwaye sifuna umxholo ukubonisa itekisi.
1 Senza isikwere kunye nesicatshulwa, siwabeka kunye kwaye sidale ibhloko kunye nenqaku lokufaka phakathi kwesikwere.
2 Senza i-scr ifayile yethu kunye nesakhiwo esifana nale:
2,2, umbhalo1 1 1 0
3,9, umbhalo2 1 1 0
3 Apho i-1 1 0 zilinganiso kwi-X no-Y ngokulandelanayo kunye nenombolo yokugqibela ukujikeleza. Into ebalulekileyo ukushiya isikhala ekupheleni komyalelo wokuphindaphinda.
Konke ngokudlala kunye nemiyalelo.
Hi bonke, Ndithanda ukwazi ukuba kwenzeka njani data ukusuka Excel ukuya AutoCAD kodwa ndifuna ezi data ukuba yemfuzo Excel kutshintshwe ngokuzenzekela AutoCAD
I-MUXAS IYAVUMA KUNYE NOKUPHILA
UJOSE DAVID uthi:
iingcebiso ezilungileyo kakhulu, mbulela
Ngokufanayo, qinisa ezintathu ukuba zifake kwi-AutoCAD
indlela yokungena kwii-abscisas zamanqaku aphezulu kunye nobukhulu bomyinge
ukuba bathathe ukuba baqokelele
indlela yokufaka amanqaku kunye nobukhulu kuphela ukusuka kwi-autocad
Yiyiphi imodeli yeGPS enayo?
Ndingayidlulisa njani i-GPS i-utm ekhomba kwi-autocad? Ngaba umntu unokundinceda?
Pablo, kufuneka uguqulwe kwi-Geographical ukuya ku-UTM.
En esi sixhobo Unokufumana itemplate ye-Excel ukuguqula.
Ndingumdwebi kwaye ndifuna ukwazi .. ngandlelaphi na ukuba ndifake i-coordinated geographical to civilCAD ukuba ukwazi umgama.
Ndiyayixabisa intsebenziswano yenu.
Siyabulela unxibelelwano, banesixhobo esikhulu apho.
Ungasebenzisa isicelo seSimahla se-Autocad [xyzToCAD] yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kwamanqaku kunye neeBhloko, kunye nokuveliswa kwetafile yoLungelelwaniso (iStakeout).
+ Ulwazi kunye nokuLanda kwi
Ngale nkqubo, hayi, kodwa kukho isixhobo se-Excel esenza oko.
james sinisterra uthi:
enkosi kakhulu, kwandinceda muyo ukuba ukungenisa amanqaku nazo ngokugqithiseleyo, ukuze AutoCAD kodwa oku wadala amathandabuzo ezintsha Andazi ukuba oku kwenza ukuba babeke inkcazelo I abonisa ulandelelwano kuba abaninzi yaye andikwazi ukuqala ukujoyina apho. Enkosi ngentsebenziswano yakho
Manuel, kubonakala ngathi awukwenzi umyalelo womgca, njengoko isithuba sichaza.
Manuel Garcia uthi:
Good ngokuhlwa, mna Inkqubo ne xyz-dxf v13.xls, kodwa andikwazi ukuqhagamshela amachokoza, AutoCAD ayisazi kum ngokubhekiselele kwezi ngongoma, ndifuna ndawonye ukujikelezisa kum aya yelizwe, ndiyabulela uthumele kum impendulo mail yam
DANA PAOLA uthi:
Hayi, ndiyathemba ukuba unokunceda kwaye ndibuhlungu ngenxa yokunyanzela kwam.
Ndinayo i X kunye Y e Excel, la ngaphandle ngxaki unokuwisa AutoCAD 2008 kude kukho entle, kodwa umbuzo wam, Ukuhamba kwam ungenza AutoCAD okanye Civilcad ngokuzenzekelayo kum reconnoitre iququzelela Excel uze uzobe ngokuzenzekelayo kum polygon, okt ukuba civil Cad AutoCAD okanye dibuejn kum yepholigoni ngaphandle kwesidingo ukukhuphela ze uncamathisele uququzelelo kumgca yomyalelo.
Nceda ndiyathemba ukuba unokunceda ndicacise isinyathelo ngesinyathelo oko ndifuna ukukwenza, mbulela.
I-imeyile yam arguello_osw@hotmail.com
Ewe, kulula kakhulu:
1 Ukhetha amanqaku afanayo kwikholam
Ngale nto, i-polyline yakho iya kwenziwa emva kweengongoma ezifanayo.
kwemini ezilungileyo neendawo yokungenisa nazo ngokugqithiseleyo, ukuze AutoCAD 2010 enkosi imiyalelo ekuqaleni kwale blog kwangolu hlobo mina amazwana q kukho imilebe ukungena ukuququzelela amanqaku, kodwa ngokuqinisekileyo oko apha echaza kananjalo wakhonza kum, umbuzo wam ke oku njani uqhagamshela bagxuphuleka amachaphaza ngelayini ???
jose ukukhuphela inkqubo encinci i-GC99 INGCUNA UMCWANGCISI WE-COVINI YINYE I-SIMPLE VERAS Q UYA KUQALA
umntu unokunyanzela ukuba undixelele indlela yokukhuphela i-freeware xyz-dxf
Andikwazi okanye ungayithumela kum imeyile yam dubercar@gmail.com Ndiyayixabisa kakhulu
Molo, ndifuna ukuguqula ikhonkco lenkqubo yeDatum PSAD56 iye kwiDatum WGS84, ndenza njani? …Masinwabe
Yokuba mhlawumbi sele wamchazela yonke le nkqubo, kodwa mna newbie, ngaphandle koko ke kufuneka yindlela elula ukuba xa ukuba uququzelelo x no y evela excel ezi AutoCAD zoba polygon in 2008.
Kwenzeka ntoni na ke wenza spreadsheet apho yonke sibalo procedimeinto lwenziwa ukufumana uququzelelo wesangqa ngenkxaso kunye neenkcukacha, ngoku ufuna kwakhona ngokuzenzekelayo ukunditsala AutoCAD ehambelana uququzelelo ifunyenwe polygon.
Ndiyathemba ukuba unokundinceda kodwa kwangaphambi kokubonga kwakho, ndithumela i-imeyile arguello_osw@hotmail.com kwaye ndiyayifuna le ncwadi, ndiyabonga.
Molweni zihlobo, jonga, sele ndingenise ngomyalelo we-concatenate kunye ne-polyline yedatha yam kwi-autocad kodwa ngoku andazi ukuba ndingaphuma njani kwi-exel ndiye kwi-autocad inkcazo yedatha nganye endinayo kwi-exel, jonga kwi-spreadsheet endinayo kwelokuqala eli nqaku , kweyesibini empuma, kowesithathu entshona, kwaye ekugqibeleni kukho ikholam yenkcazo yenqaku. Sele ndingenise amanqaku am ukusuka kwi-exel ukuya kwi-auto cad ngomyalelo el el exel concatenate ... ubungakanani beleta into enje yile yonke c ayenzayo kwi-exel xa iphuma uyigqithisela kwi-autocad ngomyalelo we-polyline kwaye inkcazo ibekwe kanye apho ihambelana khona nceda ndingathanda ukuba undincede ndiyidinge ngokukhawuleza ewe nceda .
Eyona nto inxalenye yam ingxaki ixazululwa, ibubuko eliwaka, ndandiyifumene enye indlela evelele kodwa enzima kakhulu, oku kulula kakhulu, kwimiba emininzi.
pedro i jaimes s uthi:
Ndiyabulela ndikwazi ukudlula amaphuzu angaphambili xa ndibonisana nabo
Ndiyathetha, ukuba kwi-AutoCAD kukho umyalelo owodwa wephuzu, kunye nomnye kwiindawo ezininzi.
Uxolo, kodwa ukuba ufunda isicatshulwa sam kakuhle uya kubona ukuba konke kusebuninzi, oko kuthetha ukuba ndisebenzisa ngaphezulu kweyodwa. Ucinga ntoni?
Ngaba usebenzisa amanqaku amaninzi?
Ngaba umntu unokucacisa ukungathandabuzeki kwam? kuba mna concatenated zilungelelanise e Excel, kodwa xa ndizama ukucola zibe umyalelo AutoCAD ngongoma, yenza nje mna ingongoma enye, akukho ngakumbi, yaye njengoko ndizama andikwazi kwaoko ayenze yonke, sebenzisa AutoCAD 2006.
Ngaba umntu unokunyanzela indlela engcono yokuphatha zonke iinqununu ezivela kwi-autocad? Ndiyayixabisa kakhulu.
Molweni nonke, kwixa elidlulileyo ndiyanixelela ukuba ibhlog elungileyo kakhulu kwaye inomdla !! Apha ndikushiya into, kwaye ubone ukuba ungandinceda njani ...
Umbuzo wam kukuba:
Ndiyayifuna ngandlela-thile, ukuguqula ubukhulu obuyi-2D iindiza ze-Autocad kwaye ezinokuziguqula ngokomzekelo wephepha eligqithisiweyo okanye enye inkqubo. Ndifuna kuphela ukuguqula ubukhulu (ubukhulu kuphela), ke, i-dicbujo ndiyifumene kwaye oko ndiyifunayo kukunciphisa ixesha lokuguqula umlinganiselo ngamnye oqulunqa isahluko ngasinye.
Ndiyathemba umntu onokuncedisa kwaye onokundiphendula kweli phepha okanye nge-imeyili josem213@gmail.com
yomer elmer uthi:
Ngubani ongandinceda kwezi zinto zilandelayo:
Ndilandela inkqubo yokukopisha izilungiso ukusuka kwi-AutoCAD, nangona kunjalo, ngamanye amaxesha ubonisa kuphela kwi-1 PRESENTATION okanye kwi-2 PRESENTATION kwaye akakho kwi-MODEL. Kweminye imizamo awayibonakaliyo kuyo nayiphi na iithebhu. Ungayilungisa njani loo nto?
Ndiyabulela kakhulu! Kuye kunceda kakhulu! Kucaciswe kakuhle.
xa ikucela ukuba ucacise amaphuzu, ucofa kumgca womyalelo, uze unamathele.
ngoko-zoom / ubungakanani bokubona idatha edityanisiweyo
erick b uthi:
I balandela amanyathelo achazwe ku tirhisa iingongoma ngokugqithiseleyo, ukuze AutoCAD kwaye sisoloko ucele kum ukucacisa ingongoma, ndiye AutoCAD 2010 hayi xa kukho engekangeni ingxaki, kunye mna 2007 ofisi kwaye andikwazi ukusebenza, mna ndiyakholwa ukuba dwg kodwa akukho itsalelwa ukuvula kuyo AutoCAD
UCarlos Bernal uthi:
Ndiyabonga kakhulu ngamaxwebhu akho.
Andiyicingi ukuba kukho i-lisp yaloo nto
Yintoni endiyenzayo ukuze xa ndifaka iingongoma zee-coordinates ezithathwe nge-GPS, ndizitshintsha ngokuzenzekelayo zibe nye okanye imigca emininzi? Ngaba unokwenziwa ngenye i-lisp?
Ndingayenza njani ukuze xa ndifaka iingongoma zee-coordinates ezithathwe nge-GPS, ndizitshintsha ngokuzenzekelayo zibe ngumgca? Ngaba unokwenziwa ngenye i-lisp?
Xa unayo inkqubo, Nantsi inkqubo.
RICHARD ZURITA uthi:
Ndingayifumana njani indlela yokusebenzisa i-autocad 2007, ndifuna uncedo lwakho, Mnu GALVAREZHN
Ukwenza ii-curve ze-AutoDesk zomphakathi ze-3D, inguqulo evamile ye-AutoCAD ayinayo loo misebenzi.
Xa unayo, apha inkqubo yokungenisa idibanisa kwaye ivelise imigca yeendlela.
jose orlando uthi:
Nceda, ndifuna ukusindisa idibanisa kunye nokulungelelanisa kwi-exel ukuze u-autocad 2008 kwaye uvelise ii-curved curves.
Ndifuna ukuba uncede undithole isisombululo kwisilandela esilandelayo
Molo G! BENDIJONGA I-IMEYILE OWANDISHIYE KUZO IZIMVO EZIDLULEYO NGOKUMISELWA KOMFANEKISO KWI-AUTOCAD MAP, UKUTHUMELA UMFANEKISO KODWA ANDIKUFUMANISI ...
Ukuba izinto onayo zikhokelo kunye nemida, jonga kule post apho ichazwa ukuba ungangena njani kunye nethemplate iboniswe kwi-Excel apho ungenza kube lula khona.
KUFUNEKA NDENZE UPHANDO LWAMANGCWABA NDINENJONGO YOKWENZA NGENQANABA LAMABALI….
INTSHUMBA YAMI YINYE UNOSE NJENGOBA UKUNIKELA KWIINTLOKO ZOKUPHATHWA KWI-AUTOCAD (IMISEBENZI NEMIGAQO).
KUNGENZEKA UKUBA NDIKHOKWE NGUMNTU …….
Akunjalo andiyazi into eyenzekayo kuwe, kuba iicatshulwa kufuneka zihambe kwindawo ephakamileyo.
Ukuba wenza yonke into kwinqanaba emhlabeni, uqinisekile ukuba ndihleli yoqwalaselo wetshati wesithathu Excel ifayile, ifayile generated 3D.
Zama ukuvelisa ifayile kunye nedatha yasekuqaleni kumzekelo, kwaye khangela ukuba kuhamba kakuhle, ukubona ukuba ingxaki ingaba enye.
Amanqaku ukuba uwabeke kubude bawo obuchanekileyo kodwa iinombolo zamanqaku akunjalo, ukuba umntu uyazi ukuba kwenzeka ntoni ndingavuya kakhulu ukuba ungandikhokela ...
Molweni nonke, ndisebenzise ukugqwesa kukaHector ukuhambisa idatha kwi-autocad, nangona kunjalo, ikhuphela amanqaku ahlukaniswe nenombolo yamanqaku, iinombolo zamanqaku zibabeka bonke kwinqanaba le-zero, ngethemba lokuba umntu othile angandinceda ukusombulula le ngxaki, kungxamisekile ukuba usuku lokuphakamisa kwam kwi-cad, enkosi kwangaphambili ...
Ndinokubala njani umda weeNgongoma eziza kutsalwa kwaye ziqhutywe kwi-autocad? 2007, 2008, iinguqu ze-2009
Ndiyamkela umbuzo wam: Ndingadlulisela njani umbhalo ogqithiseleyo ukuzenzekelayo, ndichaze, kwimeko yokuvelisa iprofayili, ukuba i-abscissa iyahluka njani umzekelo. 20 ngamnye indlela zemveli leemitha ufuna ukuhlela 20 inye iziimitha ixabiso abscissa, ngaba unako ukwenza itafile Excel kunye AutoCAD livela zilungelelanise esekwe XY kodwa umbhalo ehambisana
Unokwenza nge template xyz-dxf, kuyo ungangena izicwangciso x, y, z kunye nencazelo uze udale idxf nedatha.
Nantsi indlela eyenziwe ngayo.
Yahny Rodriguez uthi:
Ndifuna ukwazi kuba eziliqela zilungelelanise zejografi zicingisise nzulu njengoko akhe ifomu ukuze kwindawo eendawo AutoCAD mna livela kunye nexabiso layo Ubukhulu ebhaliweyo
Superguau, ndazama iphepha elithi uHectorin ungithume kwaye andinakubona enye inkqubo elula, ngokukhawuleza kwaye efanelekileyo ukuguqula idatha ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-Autocad. Siyabonga Hector
Ndiyifumana into enomdla umdla, ilula kwaye iyasebenza
Ingaba bephelile, ndivuyayo ndiyabonga
Camilo A uthi:
ukufikelela kwinqanaba ku-Autocad, i-syntax ye-point point, uqhagamshelanisa kwaye ungene.
Ndiyathemba ukuhambisa indlela elula ukudlula idatha ukusuka kwi-autocad:
1 ngokugqwesa kwedatha ethathwe ebaleni icwangcisiwe kwiikholamu: ibhokisi engenanto - ulungelelwaniso lwempuma- ibhokisi engenanto - ibhokisi engenanto - ulungelelwaniso lwasemantla
I-2 kwibhokisi yokuqala engenanto ibhaliweyo okanye iphuzu kwaye ikopishwe zingaphi na amanqaku
(4500 = I-EXAMPLE VALUE) Qaphela ukuba akukho ndawo, emva kwesikhombiso kuphela.
Khangela uFrank, kukho indawo epheleleyo apho isinyathelo ngesinyathelo sichazwa indlela yokwenza i-contour ne-AutoCAD kwii-coordinates.
Ukunciphisa ezinye iikholomu, usebenzisa i-criteria efanayo, umzekelo
= UKUQHATHISWA (A2, ",", B2,"," IC2)
Into endiyenzile yongeza omnye umtya, oqulethe enye i-comma, yingakho ihamba kwiingcaphuno kwaye ikholomu ngaphezu kwalolu hlobo iya kuba yiC
xa ndifaka i-X, Y, Z izixhumanisi kwi-autocad endiyenzayo ukuze ndibonise ukulungiswa kweZ, kuba ndangena kuzo ngefomati ye-concatenate kodwa ndibona kuphela i-X, kwaye ndiyabonga
Ndiyazi ukuba ine-garmin gps i-colorado kukho indlela ethile yokuqwalasela iqondo lakho lexesha eliqhubekayo lokuba ubuncinane ubuncinane beemitha ezili-2
Okulungileyo ukwazi oko kwenzelwe wena, kwaye ewe, unokubona imeko ingcono xa usebenzisa i-polyline.
Umyalelo 2008 AutoCAD yi polilinea mhlawumbi abaninzi bayiqonde njengam ekuqaleni kuba wanikela umyalelo line wabulela kodwa AutoCAD Somzobo onamacala amaninzi 2008 kukuba ukusondela phandle ngokukhawuleza
Ndincoma imidwebo yeprofayili yokusebenzisa ideskithophu yomhlaba, kulula kakhulu kwaye ngokukhawuleza ukwenza olu hlobo lomsebenzi kunokuba uziqaphele.
ukuphonononga umyalelo wenkqubo:
umyalelo wepollinea, ukukopisha ii-coordinates, unamathisele ama-coordinates, faka
ngoko usondeza ngokujonga ngokupheleleyo
Ukusebenzisa concatenated ku tirhisa iingongoma ngokugqithiseleyo, ukuze AutoCAD 2008, umsebenzi kunye UTM iququzelela data ingeniso Sika ne Cola, ukwamkela kodwa ndibona amanqaku nto okanye umzobo ukuba wonder nto ndiya kufuneka ukucwangcisa into AutoCAD ukuze ukwazi ukujonga okanye yabona, njengoko umzekelo likwajongana 408500,1050432 mbuzo uya kuba amanani elikhulu kakhulu kufuneka ukuqwalasela nantoni ndiyakwazi ukubona phezu isisitheliso AutoCAD ukuba ukubalwa sheet concatenate ilula kwaye esebenzayo kwaye isebenza kodwa ndicela ufuna ukulungisa into ethile, hayi ukuba kuba umlinganiselo iya kuba siqonde iingongoma okanye umzobo email yam yonibarreto@yahoo.es Ndiyayixabisa impendulo ongayithumela ngayo
Ukubulisa wonke umntu unokundixelela ukuba kukho nayiphi na into endivumela ukuba ndiyenze iiprofayili zangexesha elide zityalo kunye neprofayili ndiza kuba nombulelo.
Oscar Garcia uthi:
ukubingelela avuyisane nawe kule sayithi emangalisayo, nto leyo osebenza nathi thina asikho kakuhle kakhulu kwi nokuzoba iimephu ngesimo, isimo yaye ukusebenza xa kukho nayiphi na indlela yemizobo iinkangeleko longitudinal ukuba semibhobho ekuthumeleni data banekhono enkosi
Makhe sibone, wenza ntoni na?
1 Ngo-autoCAD, umyalelo wepeyinti ezininzi
2 kwi-Excel, ukhetha amaphuzu anqamlekileyo kwikholam C, kwaye uyikopishe (ctrl + C)
3 Ngo-AutoCAD, kwicala lomyalelo ucofa uze unamathele (Ctrl + V)
kwaye konke oko
Njengoko kunjalo, ndizama ukungenisa amaphupha avela kwi-autocad, ndivele ndizame nge-macro kwaye ndivele nje itafile ngamanqaku, ndazama ukuzithatha ngqo kwi-autocad kwaye mhlawumbi, umntu uyazi malunga
UManuel, ukuba awukwazi ukufumana oko, qhagamshelana nam ngeposi
ukubona ukuba ndiyakunceda
edgar vargas uthi:
UTHANDA, KUNYE INKQUBO EPHAKILEYO.
Sawubona, ndizama ukufaka amaphupha avela kwi-Excel ukuya kwi-Autocad, emva kweenkqubo kodwa andizange zidwebe amaphuzu kwi-autocad kuphela itafile ibonakala, umntu unokundinceda.
Kungenzeka ukuba bayayidrafa, velisa ngokujonga ngokupheleleyo ukuba babone ukuba baboniswa
Sawubona, ndizama ukufaka iikhomputha ze-Excel ku-Autocad, zilandelayo, kodwa andizange ndidwebe amaphuzu kwi-autocad, kuphela itafile ibonakala, umntu unokundinceda
Ndiyabulela, kufuneka ndifunde yonke into malunga ne-autocad
JORGE ... uthi:
Molo .. ,, NDINGUMFUNDI KWAKHONA NDIFUNDA I-AUTOCAD KWEYAM ... NDIFUNA UKWAZI NGUBANI ONGANDIKHOKHELA UKWENZA INGXELO YONYAKA YOKUPHILA KWI-TOPOGRAPHIC SURVEY ,,, YENKQUBO YAMANZI KUSUKELA KWIQOKELELO KWI-RESERVOIR ENJALO NDIYAQALA…. ENKOSI
Molweni ndine-autocad ka-2008..ngeSpanish .. Ndenze le nkqubo iboniswe apha ngasentla… Concatenate ..
Molo, NDINGUMFUNDI, NDIFUNDA I-AUTOCAD KWINXALENYE YAM… NDITHANDA UKUBA UMNTU ANGANDIBONISE INDLELA INGXELO YENZEKA NGAYO INGXELO YENKQUBO YAMANZI. …ENKOSI
nceda u-Oscar, unokubamba apha into oyithandayo kwi-autocad ukuze ubone ukuba kukho into engalunganga
oscar kunye uthi:
Ndizama ukusebenzisa indlela okhankanyileyo kodwa ayisebenzi, ndenza konke kwi-Excel kwaye ke ndikuxelela kwi-autocad multipoint, ndiyikopishe i-ahy kwaye akukho nto yenzekayo, inqubo ayenziwanga, andazi ukuba yenza into engalunganga.
Ndiyayixabisa uncedo lwakho
UBruss, ukuqinisekisa ukuba isebenza kuwe, zama ukufaka idatha edityanisiweyo, umzekelo i-680358 kunye ne-4621773 ukuze ubone ukuba ngaba iipalati zitsalwa. Ukuba kunjalo, jonga ukucwangciswa kwesithili somatshini wakho kuba i-comma kufuneka isetyenziswe ngokungalunganga ngamawaka kunye neyona ndawo
u-Bruss, khetha yonke into kwindawo apho iphuzu liya khona, kwaye ubonise itafile yepropati, ukubona ukuba onke amanqaku aya kwindawo enye okanye ukuba yinto enye
le fuck yiyo yonke into, ndiyithumele kodwa ingongoma enye ibonakala enye into endiyenza ngayo uncedo, siyabonga okulungileyo
Kuhle ukuba uyisombulule, mhlawumbi ukwenza iindlela onokuzama ngazo 3D Road Builder.
Ngapha koko, ngoku ndinamathandabuzo wokuba, kuzo zonke ezi ngongoma ndiyakholelwa kuzo, ndingazimanya njani ukuze zenze indlela… ..ungandinceda? Enkosi kakhulu kwakhona
Ewe, ukuba andiyazi oko kuza kwenzeka kwikhompyutheni yakho, kakuhle ndiyenzile kwaye ndifumana le fayile, endiyicinga ukuba kufuphi nommandla apho wenze khona uphando.
Uff… .ndiye ndaphambana.
Ndijonge ukulungiswa kwendawo kwaye ndiyabona ukuba kuchanekile. Enyanisweni, ndicinga ukuba i-macro enkulu kakhulu yenza umsebenzi wayo kakuhle ngenxa yokuba ndayivula ifayile ngepopu kwaye ndiyabona ukuba ulungelelaniso lwalowo nto luchitshiyelwe ngokufanelekileyo kwii-degrees, njl njl.
Ndiyabulela iwaka ngokukhawuleza ukuphendula.
UFernando, qiniseka ukuba ukucwangciswa kwendawo yakho (ipaneli yokulawula, ukulungiswa kwesithili) kuchanekile, oko kukuthi, ukwahlukaniswa kwamawaka kunjengophawu kunye neyantlupheko njenge-comma.
Qinisekisa ukuba ukhetha umyalelo ochanekileyo, empuma i-680.358,95, nome 4.621.773,92
Ndiyayizama kwaye iwela kwindawo yezityalo ukuya kwiindawo ezingenammangaliso kumlambo waseGalician
Ndizamile ukuyibeka kuGoogle emhlabeni ngeendlela ezininzi, kodwa kukho into eyenzekayo kuba iya kakhulu emantla (elwandle ...).
Ndizamile nge-EPoint2GE ngokubeka ezo kholamu kunye nokubeka indawo ye-UTM 30 nasemantla, kwaye into endiyithethileyo, iya shit (ngaphandle koko andiboni ndlela yamanqaku ......)
Ndikhuphele uGoogle Earth pro kwaye ndazama ukungenisa nge-csv, kwaye ngayo andikhange ndifike nakwintoni na kuba indinika impazamo …… ..
Kukho umntu ondincedayo nceda ?? Ndimoshe yonke intsasa ngale….:
zam i-cordenads iya kwi-psad56, i-17
Ndicinga ukuba yinto enye iplank, ngaba kufuneka uyitshintshe? kukho inkqubo ethile
Jose, los valores que tu tienes son coordenadas UTM, seguramente, lo que sucede es que ocupas conocer en que datum han sido tomados por ejemplo WGS84, NAD27 u otro, eso lo puedes ver en la configuración de sistema de coordenadas de tu GPS. También ocupas conocer la zona en que estás y hemisferio, como lo explico en oku kungena ngoko uyazi apho izilungelelaniso ze-utm zivela khona.
Xa kwenzeka ukuba yi-wgs84, ngubani owamkela iGoogle, kunye kwesi sixhobo ungayiguqula ibe yi-archlive kml, nguyena osebenzisa umhlaba weGoogle.
joaquin soto carsño uthi:
Ndiyabulela uncedo lwam mefue
Ndicinga ukuba isicelo esingcono kakhulu ongayisebenzisa:
indlela yokuthumela ngaphandle ukulungelelanisa ukuya kwi-autocad kunye nenkcazo yayo x, y, inkcazo
U-Jordi, ewe, ukuba angqinise ukuba akukho.
Santiago Symonds uthi:
Ngendlela i-galvarezhn ekhankanyiweyo ngayo, leyo yokubambisana, ingaba neempawu zongezwa kwiingongoma? Njengombono kunye nenombolo yendawo? Umbuzo ofanayo ophezulu okhankanywe nguJordi. Ndiyabonga kakhulu.-
Ndiyathandeka kakhulu kule forum, mbulela ngeminikelo yakho, ndandifuna isofthiwe yokusombulula oku. Ndifumene ezimbini, andizange ndizame, kodwa ngaba ubani owaziyo? Omnye lo ExcelLink of Xanadu kunye nezinye InnerSoft Cad. Bayazi ukuba bakhonze ukusombulula le ngxaki kunye njengoko Jorge Alejandro lwalusenza AutoCAD umzobo ukwenza utshintsho Excel spreadsheet iyahlaziywa?
jorge alejandro uthi:
iindlela ezibonisa zona, zicacile kwaye zichanekile, zizenzele kwaye i-inshurensi iya kuba neziphumo ezilungileyo.
ukugqwesa, oko kukutsho ukuba ngesizathu esithile kufuneka sitshintshe, ulungelelaniso, xa uvula i-CAD, ihlaziywe?
Ngaphambi kokubonga yonke into
Antonio Abarca Sanchez uthi:
Eyona nto isiluleko sakho siyinto enhle kwaye kuyafaneleka ukubonga kakhulu ngenxa yokuba abahlobo bethu banomdla kwizinto ezifanayo kwaye ezininzi zinokuthi zenziwe nge-TOPCAL
Hi Rafael, into ofuna ukuyenza nge-Excel yenziwa ngokukhetha iseli, iqhosha lasekunene nokukhetha ifomathi yeseli.
Ngombuzo wakho wesibini… ndiyekile, andikhange ndiyisebenzise kakhulu kuba iyasokolisa.
URafael Aranguren uthi:
Ndifuna ukuba nditshintshe izitayela zemigqa kwabanye abangekho i-Excel endikhethayo ngokukhetha kwabo ngeefom zeeseli. indlela yokufumana abanye abangesiyo i-Excel ebonisa! sibonga
Ndihlala ezandleni zakho!
Ndiyabulela kakhulu kwaye ndiyakuxabisa uncedo lwakho!
Molo uJosé, ukuba ucacise ngakumbi mhlawumbi sinokukunceda… ufuna ukukopa ntoni, yitafile egqwesileyo okanye idatha kwi-bar yomyalelo?
Ikhasi elinomdla kakhulu
Sawubona, umntu unokundixelela ukuba ndingangena njani itekisi kwiphepha eligqwesileyo kumzobo we-Autocad.
Sawubona Roberto, makhe sibone ukuba ndiyayiqonda umbuzo wakho
Ukuba lento uyenzayo ukusondela kwi umfanekiso ovavanyiweyo, oko MicroStation engcono okanye AutoCAD, ucinga kuphela amanqanaba, unika umbala, uhlobo umgca okanye isimbo umgca, ngoko yenza kwinqanaba apho ukusebenza kunye khondo.
I-macro endikhankanyileyo kwisithuba sangaphambili ungalanda amaphepha amaninzi (umz. http://www.mecinca.net/software.html, I-XYZ-DXF), kwaye yalungiselelwa yi-ITT uJuan Manuel Anguita Ordóñez, esuka eJaen (e-César ephuma eKesare).
Umzekelo, ndiyisebenzisa ukuqala umzobo wophando kwiiplanethi. Andikukhuthazi ukongeza iikhowudi ukuze 'zemozulu' kwi-Autocad (nangona iphepha lichaza ukuba kufuneka lingeniswe; akuyomfuneko), kodwa loo nto ixhomekeke kukhetho lomntu wonke.
I-macro ilula kwaye inamandla kakhulu. Okokuqala kuzo zonke, kwaye nangona kubonakala kungenangqondo, qiniseka ukuba unamacrosoft anikwe amandla kakhulu.
Kwiphepha lokuqala (elibonakaliswa ngokungagqibekanga xa uvula i-macro) uya kufumana ithebhu ye-COORDINATES. Njengoko kwakungeke kube yinto engafanelekanga, yilapho siza kutshintsha amanqaku kwaye sibambise X, Y, Z. Ndiyakholwa ukuba kuphela xa i-X ne-Y ingena, i-macro ivelisa i-0 izilungelelaniso nganye kwiingongoma ezifakwe ngokuzenzekelayo.
Kwiphepha lesibini, I-PREVISUALIZACION, xa ucofa kwi-Update Vistas siya kufumana umboniso kunye nefu lamaphuzu okuvelisa.
Okokugqibela, kwithebhu ye-OPTIONS, siza kwazisa iiparameter ezinjengokuphakama kokubhaliweyo kweleta kwi-CAD, ukuba sifuna ukuba inqaku liveliswe kwi-3D okanye kwi-2D kwaye ukuba ubungakanani bamanqaku avelisiweyo abonisiwe okanye hayi. Ndiyaphawula, ngokubhekisele kwibhokisi yokufaka igama lefayile, ngokuzenzekelayo indlela apho i * .dxf iya kwenziwa khona C: Iya kuhlala kuphela 'Cofa ukwenza i-dxf'
Ngenisa nje * .dxf kunaliphi i-CAD.
I-PS: Hectorin, ngokuqinisekileyo siyavuma ukuba i-macro isebenza ngokukhawuleza kunesisombululo esacetyiswa yi-galvarezhn, kodwa kubalulekile ukuba ungalibali ukuba sichitha iiyure kwiipredishithi kwaye, ngandlela thile, sinakho amandla ' Ukulawula 'ispredishithi ukwenza ngaphezulu kokudibanisa kunye nokuthabatha yinto ekufuneka uyiqwalasele kwaye kufuneka yaziwe ligcisa kwicandelo lethu. Nangona icotha, le ndlela ibonakala inomdla kwimeko yokungabinalo 'uncedo' njengemacro ekhankanywe apha ngasentla.
Ndiyabonga uHectorin, ndisebenzise le ndlela ukuze ndiphendule umbuzo owawufikile kum, kodwa ukuba le ndawo iyanceda ezinye izisombululo zokuvela.
Ndinefayile engcono kakhulu equlethe i-macro ethumela izilungelelaniso ukuze i-autocad kunye negama lephuzu kunye nekhowudi ukuba kuyadingeka, kungcono kunendlela yakho .. ukuba umntu ufune ukungithumela iimeyile zabo hectorgh65@hotmail.com
luis fernando moran marquez uthi:
Ndiyifumana into enomdla kwaye kulula ukuyibulela
Ndilifumana igalelo olicebisayo linomdla kakhulu, kuba ibonisa ukuba akufuneki 'sinike' yonke into kwiinkqubo ezincinci okanye ii-macros, nangona kufanelekile ukuba yamkelwe ngamanye amaxesha yenza ubomi bethu bube lula :-).
Nangona kunjalo, kukho i-encro encane ye-Excel, malunga ne-400 kb, ekuvumela ukuba wenze oko uthethayo kwaye mna ndiyifumana into emangalisayo. Ibizwa ngokuba yi-XYZ-DXF, kwaye unokuyikhuphela mahhala (ikhululekile) ukuba uyayifuna.
Enye indlela yokwenza 🙂